10 endri-javatra tsara indrindra amin'ny Ubuntu 15.10 Wily Werewolf | la-manette.com
Ubuntu 15.10 dia navoakan'ny Canonical ary azo alaina amin'ny downloading. Vakio ity lahatsoratra ity, mianara momba ny endrik'i Ubuntu 15.10, ary raiso ny fanapahan-kevitra momba ny fanavaozana.
Taorian'ny enim-bolana nisian'ny fampandrosoana dia navoaka ny Ubuntu 15.10 Wily Werewolf ary azo alaina. Azonao atao koa misintona sary ISO, na manavao ny rafitra Ubuntu 15.04 misy anao.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hampahafantatra anao ny endri-javatra 10 tsara indrindra amin'ny Ubuntu 15.10 Wily Werewolf izahay. Andeha hojerentsika:
Ubuntu 15.10 dia mifototra amin'ny kernel version 4.2, izay navoaka tamin'ny faran'ny volana Aogositra.
Anisan'ny fanatsarana lehibe ny Linux 4.2, misy fanohanan'ny mpamily kernel vaovao ho an'ny AMD GPUs, fanohanana vaovao ho an'ny boards fampandrosoana ARM, fanohanana NV-DIMMs, fanohanana ny encryption rafitra rakitra F2FS sy ny maro hafa.
2. Unity 7.3.3 Unity Default Desktop Shell
Ny shell desktop default an'ny Ubuntu, Unity, dia nahazo fanamboarana kely sy fanatsarana ny version 15.10. Izy io dia manome topimaso momba ny Unity 8, interface interface ho an'ny taranaka manaraka an'ny Canonical. Ny iray amin'ireo fiovana lehibe indrindra dia ny fandaozan'i Ubuntu ny scrollbars misy ny Unity.
Azonao atao izao ny misintona sy mandatsaka ny rindranasa avy amin'ny Unity Dash mankany amin'ny desktop, ny bokotra fivoahana amin'izao fotoana izao dia misy fiantraikany amin'ny tsindry, ny fitetezana ambony / midina dia miasa toy ny horonana ao amin'ny Unity Dash, ary fanatsarana kely maro hafa.
Ubuntu Make dia fampiasa andalana baiko izay manamora ny fametrahana fitaovana mpamorona malaza. Izy izao dia manohana sehatra, serivisy ary rafitra, ary koa tontolo fampandrosoana Android mamita.
Vakio ihany koa: Warzone Best M16 loadout safidy: poteho ny fahavalonao ho antsasany toy ny pro
Ubuntu 15.10 dia mandeha miaraka amin'ny OpenStack 2014 2.0, codenamed Liberty. Ity rindrambaiko misokatra ho an'ny fananganana rahona tsy miankina sy ho an'ny daholobe ity dia mifanaraka amin'ny tsingerin'ny fampandrosoana Ubuntu.
5. Anaran'ny tambajotra maharitra sy tsy misy fanjakana
Ny dikan-teny farany amin'ny fizarana Ubuntu 15.10 Linux dia miaraka amin'ny anaran'ny tambajotra maharitra sy tsy misy fanjakana. Midika izany fa azo atao izao ny manonona ny seha-pifandraisana amin'ny anarana mahafeno fepetra kokoa, izay hitoetra ho manan-kery na dia aorian'ny fanombohana na fanovana fitaovana aza.
Miaraka amin'ny Ubuntu 15.10, ny fanavaozana GNOME Tonga ny 3.16.x ary nampiana ny ankamaroan'ny fampiharana GNOME 3.16. Ity dikan-teny ity dia azo havaozina amin'ny GNOME 3.18. Ny birao MATE ampiasain'ny Ubuntu MATE dia ao amin'ny version 1.10.
7. LXD fitahirizana teknolojia
LXD for Containers dia natomboka tao amin'ny Ubuntu 15.04, saingy efa vonona ny famokarana ary tonga miaraka amin'ny fahaiza-manao bebe kokoa toy ny milina virtoaly. Araka ny Canonical, manana fahafahana maka sary sy fifindra-monina mivantana ianao izao.
8. Fanohanana mpanara-maso etona
Ny dikan-teny Ubuntu 15.10 dia manohana ny mpitantana Steam ary tsy mila fanitsiana na fanovana ny mpilalao.
Ny hany tsy maintsy ataonao dia ny mametraka Steam amin'ny alàlan'ny fonosana Ubuntu ao amin'ny Software Center ary ampidiro ny mpanara-maso vaovao anao.
9. Fanohanana ny GCC 5 sy Python 3.x
Tonga niaraka tamin'ny fanohanana ny GCC 15.10 sy Python 5.x ny Ubuntu 3. Ny mpamorona dia tsy maintsy miandry ny Ubuntu 16.04 LTS, izay hahatonga ny Python 3.x ho default.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fametrahana ny Google Play Store amin'ny finday Huawei rehetra miaraka amin'ny Googlefier
10. Fampiharana nohavaozina:
Totem (aka 'Videos') 3.16
Ny Ubuntu 15.10 koa dia alefa miaraka amin'ny wallpaper default sy fanamboarana fiarovana.
Ampidino ny Ubuntu 15.10.
Tianao ve ireo endri-javatra amin'ny Ubuntu 15.10 ireo? Ampahafantaro anay amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany.
10 Best Web Browsing Apps ho an'ny iPhone: Alternatives tsara indrindra amin'ny Safari